I-Plex.Earth I-3.0 Iinkonzo zeWMS kwi-AutoCAD-Geofumadas
Ngo-Okthobha, 2012 AutoCAD-AutoDesk, Google umhlaba / imephu
I-Plex.Earth 3.0, endibenayo ixesha lokuzama xa ndichaza umhla wokufumaneka kwinguqu ecacileyo, ifikile kum. Mhlawumbi ngenyanga kaNovemba ka-2012.
Qalisa nge-AutoCAD 2013
Mhlawumbi le noveli kakhulu kukuba olu guqulelo senziwa ngokukhethekileyo AutoCAD 2013, okanye naziphi na iinguqulelo zayo nkqo (Civil 3D 2013, 2013 AutoCAD Map, njalo njalo)
Oku kubalulekile ukukhankanya, njengoko AutoDesk kule uguqulelo ukuzisa ukhubaze ikhono ukungenisa Civil 3D Google Earth umfanekiso kunye nemodeli yesuntswana, ukukwazi isivumelwano apho yayibaleka owenza Plex.Earth kwiinguqulelo zangaphambili, njengoko ndathetha usuku siye sathintela kwimiba ingaba yayingekho mthethweni okanye ayikho.
Njengoko le nguqulo, i-PlexScape inesivumelwano sayo kunye ne-Google ukuba ikwazi ukungenisa umfanekiso, ukuvumelanisa, ukungenisa igridi kunye nomgca wokujikeleza. Ngoxa i-AutoCAD yoLuntu 3D i-2013 ayisiniki ithuba lokuba, nangona yayisisithombe sombuqo nesisombululo esifanelekileyo.
Inkxaso yeenkonzo zeWMS
Le nguqulo izisa ithebhu I-Plex.Earth - I-Map Explorer, ukhetho lokulayisha iinkonzo zeemephu zewebhu, lunomdla kakhulu kuba ngoku akukho msebenzisi we-AutoCAD onokumxhomekeka kule nto eyenza i-Civil 3D.
Ndiyakhumbula ukuba kwiinguqu zangaphambili oko ndandenzayo ukulayisha i-WMS kwi-Google, ukuba yayixhasayo kwaye ukusuka apho ingayifaka umfanekiso. Ngoku iinkonzo zinokuphandwa nge-URL ngqo okanye kwindawo yendawo. Kuyathakazelisa, kuba unokukhetha iindawo ezikhoyo njengoko kuboniswe kumfanekiso olandelayo.
Iyakwazi kwakhona ukugcinwa njenge xml kwifayile yesandiso se-pxmap, kwaye njengokuba ungayibona kule meko, apho isisombululo esiphezulu sePNOA kunye neCadastral Cartography ze-IDE Española ichazwe. Emva koko unako ukubiza ifayile kwaye iindawo sele zilungisiwe.
Kokuba kuchaziwe inkonzo ukusetyenziswa, ungakwazi ukungenisa noba umfanekiso omnye, tile okanye limane liyeka udidi geometry yepholigoni njengoko wenzayo Google Earth. Kule ndawo zixhobo zokunciphisa umgca womfanekiso okanye ukudibanisa ezininzi ukuya kwelinye.
Ukususela kwizinto eziphambili, unokukhangela iimephu ezikhoyo ngelizwe. Ndiyithande le ngcamango, kuba iqondisa umsebenzisi oqhelekileyo we-AutoCAD, ongeyena ingcali ye-GIS kodwa umshicileli, ongalindelanga ukwazi okuningi malunga nee-IDE, kodwa ngubani ophethe umfanekiso wesemva komsebenzi ophuhliswayo. Ngoko ingqiqo yabalweli beGrike bePlex.Earth yenza lula isisombululo:
Uphi na? Nantsi imephu ehlala kuyo!
Ukulungiswa kwakhona kweRibhoni
Ukusebenza komxholo weerbhoni kunye neepaneli zokuthunyelwa ziphuculwe kakhulu. Izixhobo esaziwa ngaphambili zishiywe kwithebhu yesibini: I-Plex.Earth - Google Earth, ziphi ukukhetha ukupapashwa kwe-AutoCAD kwiGoogle Earth, ukungenisa imifanekiso kwimifanekiso, ipoloni okanye indlela kunye nokudala imodeli yedijithali kunye nomgca weGoogle Earth ukuya kwi-AutoCAD.
Kwithebhu yesithathu sele ikhona Plex.Earth - Extensions, ziphi izixhobo zokucwangciswa komfanekiso, ukudala indawo kunye nokuguqulwa kokuguqulwa usebenzisa isevisi ye-WS noko unokubona kwiGoogle Maps idibanisa usebenzisa phantse nayiphi na inkqubo yehlabathi idibeneyo.
Ngamafutshane, kubonakala linyathelo elikhulu ekubandakanyeni Plex.Earth Web Map Iinkonzo esongeza ukuvumelanisa Google Earth imifanekiso zimela iimpawu ukuba AutoCAD akanayo, yaye mhlawumbi angeke kwixesha elifutshane.
Ndiyakuqinisekisa oko ndathetha ngaphambili, xa ndabona ngokokuqala ngqa Plex.Earth: Ukwenza lula kwezi zicwangciso zabahlobo kuyamangalisa:
Ngaba ufuna umfanekiso weGoogle Earth kwi-AutoCAD? Nantsi
Isisombululo esiphezulu? Ngokuqinisekileyo, nciphisa ngomfanekiso
Ngendlela? Hamba phambili, unciphise njengetampu kwi-axis
Ikharti yezinga? Kwakhona
Ngoku isevisi yemephu.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-GeoConverter idibaniswe kwi-CONDOR
Post Next Station Total Manual Sokkia Series 50 in SpanishOkulandelayo "
Iimpendulo ze-8 kwi "Plex.Earth 3.0 Iinkonzo zeWMS kwi-AutoCAD"
ntoni up ???
ufake plex.earth e 3d civil kwaye ufake amaxesha 3 kwaye uqale see civil ukuba usindanisa imodyuli of plexearth kodwa ndibona akukho tab, akukho menu kusetyenzwa phantsi kwazo, akukho tape okanye malunga molekyuli.
Ndabona zonke iindawo zokusebenzela zabasebenzi.
mbulela x impendulo
Ukungalungi, akukho zikhokelo ngeSpanish. Kodwa kukho iividiyo kwi-Youtube yezinto ezahlukeneyo ezenziwa yiPlex.Earth
Alberto Rodriguez uthi:
Esi sixhobo sinomdla kwaye sinceda kakhulu, ndiyayilinga kodwa ndifuna ukwazi ukuba
kukho iincwadi zeSpeyin zokusetyenziswa kunye nesicelo
Ukuba uthetha ukuba imodeli yendawo yedigital kunye ne-curves ze-nivesl, ewe. I-Plex.Earth isebenza nge-AutoCAD yinguqulelo eqhelekileyo kwaye ikunika amandla okwenza izinto ezinokwenziwa kuphela nge-Civil3D, njengokungenisa imessage yenqaku lokuphakama, ukuvelisa i-contours, njl.
mbulela Ndinombuzo nge modyuli yeplex. umhlaba ndiyakwazi ukuthumela ngaphandle kwi-hec ras ngaphandle kokuba ndizimele ngenxa yokuba ndine-autocad elula
Le nguqulo ayikabikho ngokukhuphela. Ngokunokwenzeka ekupheleni kukaNovemba.
Ukuphonononga ndiyenzile kwakukho ngenguqulo yeBeta abayinike yona.
Ndinokungabaza apho ndiyakwazi ukukhuphela i-3.0 tshekisha yale program kuba kwiwebhusayithi esemthethweni kukho kuphela i-2.5 check and if you have it, unokuba undilungiselele kwangaphambili kwangaphambili